app: Martin Vrijland
I Anja Schaap dia maty teo ambonin'ny ranomasina teo ambonin'ny Nosy Wadden, saingy iza no sambo (myshiptracking.com)?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 20 June 2019	• 21 Comments
Vaovao malaza omaly, satria i Anja Schaap dia hita maty tany an-dranomasina. Tsy ranomasina, fa ny Ranomasina Avaratra: ambonin'ireo nosy Wadden (araka ny tatitry ny media). Na izany aza, raha jerentsika ny tantaran'ny fandefasana amin'ny andro sy ny fotoana hitany (18 June 13: ora 30), dia tsy misy sambo mipetraka ao mihitsy. [...]
Anja Schaap dia mahita sary ao amin'ny 'Fanadihadiana nangatahana' ary noho izany tsy misy PsyOp?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 19 June 2019	• 7 Comments
Raha toa ireo fangatahan'ny fanadihadiana nangatahana tamin'ny alina, dia azonao atao ny manatsoaka avy hatrany fa tsy afaka ny hifampiraharaha amin'ny hafa PsyOp (fiasa ara-tsaina) intsony. Ao amin'ny lahatsoratro mikasika ny tsy hita navoakan'i Anja Schaap, nampiseho ny fomba fijerin'ny RTL News ny fikarohana 'Sherlock Holmes' miaraka amin'ny fampahalalam-baovao [...]
Missing Siebe Viegers: Foundation 'Te hirotsaka ve ianao?' Manolotra vahaolana amin'ny zoekjemee.nl
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 22 Febroary 2019	• 18 Comments
Asa mahatalanjona mahatalanjona ny manamarika fa ny fototra dia naorina taorian'ny fanjavonan'i Ruben sy Julian tao amin'ny 2013; ny fanjavonany izay niafara tamin'ny fahafatesan'ireo ankizilahy maty tao anaty tavoahangy ary ny ra namono tena. Mazava ho azy fa tsy nahazo ny porofo izahay ary ilay lasibatra be mpahalala dia ny [...]
Fampitandremana Shinoa mampitandrina ny trosan'ny olona ao amin'ny faritra misy anao
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 23 Janoary 2019	• 9 Comments
Efa nahazo ny rafitra momba ny fananganana Sesame tany Sina izahay; rafitra iray izay manome valisoa ho an'ny olona raha toa ka manolo-tena an-tsitrapo sy manasazy raha mandika lalàna izy ireo. Ankoatr'izany, io rafitra io dia miantoka fa ny vokatrao dia tsy dia misy fiantraikany amin'ny fifampiraharahana amin'ny olona miaraka amin'ny isa latsaky ny ambany ary mahasoa amin'ny olona tsara tarehy. Iza ilay Black [...]
Nosamborina ny mpandrindra 33 taona noho ny fitsikilovana ny vehivavy maromaro tamin'ny alalan'ny fakantsary fakantsary
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 20 Martsa 2018	• 10 Comments
Iza no tsy mahatsiaro ilay tantara vao haingana momba ny sary nokendrehin'ireo vehivavy mpihaza hena any amin'ny sauna ao Nederasselt. Efa gaga izahay tamin'izany. Indrisy anefa fa vao mainka miharatsy izany amin'izao fotoana izao fa nahita vehivavy marobe nampiasa ny fakantsariny finday tao amin'ny efitra fatoriany, tao amin'ny efitra fidiovana, tao amin'ny efitra fandroana [...]
Ny raharaha 'Fabrice' an'i Anne Faber: Ny polisy dia manolotra ny rindrambaiko hikaroka fomba fijery mifototra amin'ny olom-pirenena
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 18 Desambra 2017	• 14 Comments
"Ny polisy dia maniry ny hiara-miasa bebe kokoa amin'ny olom-pirenena amin'ny fahitana olona tsy hita. Ny fikarohan-draharaha tsy voahaja dia afaka manakorontana ny fanadihadiana ataon'ny polisy. Izany no ampitandreman'i Izanne de Wit, manampahaizana manokana amin'ny olona tsy hita ao amin'ny polisy Midden Nederland. Mety misy fikarohana manokana azo atao. "Toy izao no nanambaràn'ny Dagblad van het Noorden (ny fanontana vita printy) androany tamin'ny 18 Desambra. Tena tsara aho [...]
Anne Faber no mety hitranga: fakàna an-keriny, vono olona na zavatra hafa?
Filed in ANNE FABER, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 8 Oktobra 2017	• 4 Comments
Avy amin'ny fampahalalam-baovao rehetra ka hatramin'izao dia afaka manadihady ny antony mahatonga ny olona tsy hita an'i Anne Faber. Avy eo izahay dia mijery ny fampiharana farany nalefa, ny toerana izay nahitana ny jirony, bisikilety ary kitapo ary avy eo dia afaka manatsoaka haingana fa tsy misy fanontaniana [...]
Total visits: 15.855.382
Reincarnation sy ny tsingerin'ny zava-misy araka ny ahitantsika azy
ZalmInBlik op Moa ve ny rafitry ny fiaramanidina Iraniana manohitra ny fiaramanidina Iraniana izay nanala ny Boeing 737-800 (sidina PS752) no voasintona?
Riffian op Moa ve ny rafitry ny fiaramanidina Iraniana manohitra ny fiaramanidina Iraniana izay nanala ny Boeing 737-800 (sidina PS752) no voasintona?
Fakafakao op Moa ve ny rafitry ny fiaramanidina Iraniana manohitra ny fiaramanidina Iraniana izay nanala ny Boeing 737-800 (sidina PS752) no voasintona?
Wilfred Bakker op Hafiriana no nahitan'i Trump teo amin'ny lasabe izao fa hita maso ny famantarana voalohany amin'ny ady an-trano?